MYITMYAT – Page3– NEWS AND ENTERTAINMENT
အရေးပြား လေးဖက်နာ အတွက် ပင်စိမ်းရွက်
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျဒီနေ့ ကျွန်တော် အရေပြား လေးဘက်နာ အကြောင်း ပြောပြပါ့မယ်။ SLE ဆိုတာဘာလဲ…? SLE ဆိုတာက အရေပြား လေးဘက်နာ ရောဂါ ကိုဆိုလိုပြီး အပြည့်အစုံက(Systemic Lupus Erythematosus)ဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြား လေးဘက်နာ ရောဂါ ဟာ(Lupus)လို့ခေါ်တဲ့ ပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဒီပိုးဟာ နာတာရှည် ဖူးရောင်တတ်တဲ့ပိုး(Lupus isachronic inflammatory disease)ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ကူးစက် […]
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် အံ့သြဖွယ်ဖြစ်၏။မယုံနိုင်စရာလည်းဖြစ်ရသည်။ မြွေဆိုး ကိုက်ခံရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ချင်းတွင်းမြစ်နဘေး ပလူဇဝရွာလေးကသစ်ထုတ်သမားစံပြ မြွေပွေး ကိုက်ခံရသည်။ မစိန် ဆရာတော်ကြီး ပင့်ကူ ထိပ်ပိတ်ရွက် များကို ထောင်း စေကာ ဖန်ခွက် တစ်လုံးတိုက်၏။ နှာခေါင်း ထဲညစ်ထဲ့ပေးပြီး ပင့်ကူထိပ်ပိတ်ရွက်များစက်လှေပေါ်တင်ပေးလိုက်၍ ကလေးဝဆေးရုံသို့ပို့စေသည်။လမ်းတွင် ပင့်ကူ ထိပ်ပိတ်ပင် အရွက်ကို သတ္တုရည် ညစ်၍ လူနာ၏ပါးစပ်သို့ အရည်စက်ချပေးခြင်းနှင့်နှာခေါင်းဝသို့ အရည်စက် ထဲ့ပေးခြင်းဖြင့့််ဆေးရုံရောက်ခဲ့ရာ အဆိပ် မတက်၍ဆရာဝန်အံ့သြရ သည် […]
ကင်ဆာဆဲလ် များကို သေစေနိူင်တဲ့ အံသြဖွယ် အစွမ်း နဲ့ ဖျော်ရည်
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ရှေးကတည်းက အဆင့်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ အစွမ်းထက် ဖျော်ရည် တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်စွာသောက်သုံးကြည့်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ် ကို ဘေးမဖြစ်စေပါဘူး။ကောင်းကျိုးသာရစေတဲ့အစွမ်း ထက် ဖျော်ရည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖျော်ရည်ကို အာလူး တစ်လုံး ( တစ်ချိုတွေကတော့ Beetrootလို့ခေါ်တဲ့ဥတစ်မျိုးနဲ့လည်း အာလူး နေရာမှာ အစားထိုးသုံးပါတယ် )၊ မုန်လာဥနီ တစ်တောင့်၊ ပန်းသီး တစ်လုံးပေါင်းစပ်ပြီး ဖော်စပ်ရတာပါ။ သစ်သီးအားလုံးကိုဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ အခွံခွာပါ။ ပြီးရင်ဖျော်စက်ထဲထည့်ကြိတ်ပြီးသည်နှင့် ချက်ခြင်း သောက်သုံးနိူင်ပါပြီ။ သံပုရာသီး ၊ […]
ရွာဓလေ့ လင်ကောင်မပေါ်တဲ့ ဗိုက် လို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အသားလုံး ကို ကျွန်နော်ပေးခဲ့သော ဆေးနည်း
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ​ဆေးကုသိုလ်​ ရှယ်​​ပေးပါ. မိမိ ပတ်​ဝန်း​ကျင်​သိရ​အောင် ကျွန်​​တော်​ ကိုယ်​တိုင်​ ကြုံခဲ့ရတဲ့ သ​င်္ဘောရွက်​ အစွမ်း ကျွန်​​တော်​ အိမ်​​ဘေး က ၂၂နှစ်​အရွယ်​ က​လေးမ​လေး​ရောဂါစဖြစ်​ပါတယ်​။သူတို့စဖြစ်​တဲ့ ​ရောဂါဟာ ​ဗိုက် မှာ ဘာရယ်​မသိတဲ့ အလုံး​လေးစတည်​လာပါတယ်​။ အဲ့မှာ ​တောဓ​လေ့ မြန်​မာပီပီအချို့က ​ဗိုက်​ကြီးတယ်​​ပြောလို့​ပြော လင်​​ပြောရမှာရှက်​တာ​နေမှာဆိုလိုဆိုနဲ့ မိဘ​တွေကလဲရိုးချက်​သားသမီးကိုမယုံပဲ သူများ​ပြောစကားနဲ့ က​လေးမ​လေးကို စတင်​ပြီး မကြည်​ပါ​တော့တယ်​။က​လေးမ​လေးမှာ ​ရောဂါထက်​ ပတ်​ဝန်းကျင်​ရိုက်​ခက်​မှု့ဒဏ်​​ကြောင့်​ ခုခံအားကျဆင်းလာပြီး တစ်​​နေ့ထက်​ […]
နင်လားဟဲ့ ကင်ဆာ အဖိတ်စင်မရှိ ကင်ဆာ ပျောက်ဆေး (အစ မှ အဆုံး တိတိကျကျသေသေချာချာဖတ်ပါ)
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် (ဤ ဆေးနည်း ဖြင့် ဖေါ်စပ်လျှက် ဝေဒနာရှင် များထံမှ ငွေအဆမတန် တောင်းမည့် ဆရာများ အသုံးပြုလျှင် ဤဆေးအစွမ်းမထက်ပါစေ သတည်း) (ဝေဒနာရှင် များသုံးစွဲပါက နတ်ဆေးတစ်မျှ စွမ်းပါစေသားးး) ဆေးနည်း မပြောမီ ဆေး ရဲ့ရာဇဝင် ကိုပြောပြပါရစေ။ ကင်ဆာ ကုနေတဲ့ ဆရာသခင် ထံမှာ ၃ နှစ်လုံးလုံး ခြေဆုပ်လက်နယ်ပြုစုပြီးမှ ရလာတဲ့ဆေးနည်းဖြစ်လို့ ကျွန်တော့် အတွက် တန်ဘိုး မဖြတ်နိုင်သောဆေးဖြစ်ပါသည်။ […]
ဆီးချို ရောဂါ အတွက် ကြက် နဲ သံပုရာသီး ပဲလိုတယ်
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် လူတယောက်ဟာ တနေ့ မှာနေမကောင်းဖြစ်သတဲ့ သူဟာ အာတွေခြောက်ပြီး အမြဲ ရေဆာ ထမင်း လည်း အမြဲဆာနေသလို တုန်နေသတဲ့ ချွေးစေး တွေပြန် ဆီး ကခဏခဏသွားတာနဲ့ ဆရာဝန်ပြ စစ်ဆေးကြည့်တော့ ဆီးချို ရောဂါ ဖြစ်နေပါသတဲ့ ဒီလို နဲ့ဆေးစားလာတာ ၂ နှစ်လောက် ကြာပါတယ် အသက် ၅၇ မှာ မလေးရှား က သူ […]
အတွင်းလိပ် ​​၊အပြင်လိပ် လိပ်​​ခေါင်း ရောဂါ တွေကိုအမြစ်ဖြုတ်နေတဲ့​ ​ဆေးနည်း
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် နဂါးစက် မျိုးစိတ်ဝင်ဆင်စွယ်ဂမုန်းနှင့် ရှားစောင်း လက်ညှိုး ​ဆေးအသုံး[ ကွမ်းရွက်နှင့်အတွင်းလိပ်ခေါင်းဆေးတင်ထားပါသည်] #ကု ထုံး ​ဆေးချက်​ တို့ မ၀ှက်​# § ဆင်​စွယ်​ဂမုန်း § ရှား​စောင်း လက်​ ညှိုး #လိပ်​​ခေါင်း ​ရောဂါ ​ပျောက်​ ​ဆေးနည်း များ# § > ဆင်စွယ်ဂမုန်း ၅ ကျပ်သား > မြေပဲဆီ/နှမ်းဆီ ၅ကျပ်သား > ကြက်သွန်နီ ၂ကျပ်သား […]
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ဒီေးနည်းလေးကတော့ကျွန်မ မျက်မြင်ဆေးနည်းလေးဖြစ်တာကြောင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မမောင်လေးခြေထောက်မှာကြွက်နို့ပေါက်တာ သုံးလုံးထိ ဖြစ်လာပါရဲ့။ဆေးနည်းတွေစမ်းကြည့်ပေမဲ့မပျောက်ပါဘူး။မုံထူး ကျေးရွာက ကိုညိုမောင်ပြောပြတဲ့ဆေးနည်းနဲ့သုံးရက်ပဲကြာ ပါတယ် ကြွက်နို့ လုံးဝပျောက်သွားပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကြွက်နို့ ပေါက်တဲ့မောင်လေး က စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့် အပြင် ခြံထဲကဧကရာဇ်အပင် အမြစ်တို့ကိုပါ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေး လို့ သေသေချာချာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ခြေထောက်မှာ ကြွက်နို့ကအမာရွတ်လောက်ပဲထင်ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဆန် အနည်းငယ်ယူပါ.. ရေ အနည်းငယ်ဖြင့်ဖျော်ပါ(မည်သည့်ဆန်မဆို)ဧကရာဇ်အဖြစ်ကိုယူပြီးဆန်ဆေးရည်အနည်းငယ်ဖြင့်ခပ်ပျစ်ပျစ်သွေးလိမ်းပါ(အနာကိုသွေးထွက်အောင်ကုတ်ဖဲ့စရာလုံးဝမလိုပါ)သနပ်ခါးလိမ်းသလို ခပ်ပျစ်ပျစ်လေးလိမ်းထားပါ။ ဆေးခြောက်အောင်ထားပါ။ခြေထောက်ရေမစိုပါစေနှင့်အဝတ်စည်းထားရန်မလိုပါ။တစ်နေ့ (3) ကြိမ် နံနက် နေ့လည် […]
အကြောဆိုင်း၊ လေဖြန်းရောဂါများအတွက် ဆေးကောင်းတစ်လက်
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် လူသားတွေဟာအသက်အရွယ်လေးအတန်သင့်ရလာတာနဲ့အမျှသွေးသားတွေဟာလည်းတဖြေးဖြေးဆုတ်ယုတ်လာပြီးအလုပ်တွေပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်တဲ့ဒဏ်ကိုမိမိတို့ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးကခံနိုင်ရည်စွမ်းကျဆင်းလာတတ်ပါတယ်။ အလုပ် တွေပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရတဲ့,လုပ်ခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောတွေကမကြာခဏညောင်းညာကိုက်ခဲနေတာမျိုး,အကြောတွေဆိုင်းချင်သလိုလိုဖြစ်သွားတာ,အကြောတွေလုံးဝဆိုင်သွားတာမျိုး,လေဖြန်းချင်သလိုလိုဖြစ်သွားတာ,လုံးဝလေ ဖြန်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ရောဂါ တွေခံစားနေရပြီဆိုရင်အခုဖော်ပြမဲ့ဆေးနည်းလေးကသက်သာပျောက်ကင်းစေမှာပါ။ဦးဇင်းကိုယ်လဲဦးဇင်းနဲ့ပက်သတ်ဆက်နွယ်နေတဲ့ဒကာကြီးတွေ,ဒကာမကြီးတွေကိုဆေးနည်းပြောပြပြီးသုံးစွဲဖို့တိုက်တွန်းသလိုကြုံတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဖော်စပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အမြဲလိုလိုညောင်းညာကိုက်ခဲနေသူများဟာတစ်ပတ်လောက်ပုံမှန်စားလိုက်တဲ့အခါညောင်းညာကိုက်ခဲမှုတွေပျောက်ကင်းပြီးနောက်ထပ်ပေါ်မလာတော့ေ ကြာင်းဝမ်းသာအားရလာပြီးပြောကြပါတယ်။ အကြောဆိုင်းနေသူများနဲ့လေဖြန်းနေသူများကကလည်းတစ်လ,နှစ်လစသည်အားဖြင့်ဖော်စားလိုက်,ခဏနားလိုက်နဲ့သုံးစွဲလိုက်လို့သက်သာပျောက်ကင်းကြောင်းဝမ်းသာအားရပြန်ပြောကြပါတယ်။ ဆေးနည်းလေးကတော ၁။ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးမှည့်မှည့်ရယ်(မမှည့်ရင်ချောင်းဆိုးတတ်ပါသည်) ၂။သက်ရင်းကြီးရွက်ရယ်(၎င်းအပင်မှာဒေသတိုင်းတွင်ပေါက်လေ့ရှိပါသည်) ဒီနှစ်မျိုးပဲလိုအပ်မှာပါ။ ဖော်စပ်ပုံကတော့ ၁။ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးကိုဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်အတွင်းသားလေးတွေပေါ်ရုံလောက်လှီးဖြတ်ထားပါ။ ၂။သက်ရင်းကြီးရွက်ကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီးနှစ်ရွက်သုံးရွက်ထပ်ကာငှက်ပျောသီးကိုလုံအောင်ဖုံး၍လျော်နှင့်စည်းပြီးထုတ်ပါ။ ၃။ပြီးလျှင်အိုးထဲထည့်ပြီးမီးဖိုပေါ်မှာ၆-နာရီကြာပြုတ်ရပါမည်။(၆-နာရီဆိုငြားလည်းဦးဇင်းကတောနှစ်ရေပွက်ပြီးဖိုပေါ်မှာမီးအေးအေးနဲ့ပစ်ထားလိုက်ပါသည်) စားပုံစားနည်းကတော့ ပြုပ်ပြီးသားအထုပ်လေးကိုအပေါ်ကဖက်တွေပြန်ခွာ,ငှက်ပျောသီးကိုလည်းအခွံခွာပြီးအတွင်းသားကိုသာ– မနက်တစ်လုံး ညတစ်လုံး တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းခရီးပင်ပန်းလို့ အလုပ်တွေပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရလို့တစ်ကိုယ်လုံးညောင်းညာကိုက်ခဲနေရင် ၎င်းငှက်ပျောသီးလေးတစ်လုံးမျှစားလိုက်တာနဲ့ညောင်းညာကိုက်ခဲမှုများလျင်မြန်စွာသက်သာပါကြောင်းကိုယ်တွေ့မို့သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေ။ ဖော်စပ်ပုံအဆင်ဆင့်ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အထက်ပါဆေးနည်းကိုမိမိအားတစ်ဆင့်မျှဝေ ပေးခဲ့ပါသောသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အရှင်ဝိစိတ္တ(ကျွန်ုပ်တို့အခေါ်”ဦးဝဲကျော်”)စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ပံ့သကူချောင်အားအထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ […]
သွေးတိုးရောဂါ လုံးဝပျောက်ကင်းစေသည့် ပြောင်းဖူးပြုတ်ရည်
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် သွေးတိုးရောဂါ ဆိုတာဘာလဲ။ သွေးတိုးရောဂါဟာ သွေးဖြတ်သန်းစီးဆင်းတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောတွေဟာ ပုံမှန် ဖိအား ထက်များနေတဲ့ သွေးပေါင်တက်တဲ့ အခြေအနေကို ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ဟာ ရက်သတ္တပတ် အတော်များများ အမြဲတမ်း ၁၄၀၊ ၉၀ ကျော်နေမယ်ဆိုရင် သွေးတိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။ သွေးလွှတ်ကြောနံရံကို ဆန့်ကျင်တဲ့ သွေးတွေရဲ့ အားဟာ ပုံမှန်ထက်ကျော်နေတယ်ဆိုရင် သွေးတိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေ မရှိပဲနဲ့ ရေရှည်မှာဆိုရင် သူဟာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ်တဲ့ […]